Isihlungi se-grill kusivivinyo sokuqhathaniswa nomhlahlandlela. Ukubuyekezwa kwakho okuwusizo.
Qala ingadi Garden Leisure Grill wezindlu
1 With cleaner grill ngokumelene umlotha, grease kanye marinade asele
2 Grille ukuhlanza - indaba ekhethekile
3 Abathengisi be-barbecue abamnene bavikela imvelo kanye nempilo
4 Isikhathi sokuchayeka kanye nezesekeli ezidingekayo
5 Ukusetshenziswa kwemibhoshongo ye-grill
6 Lezi yizona ezihlanzekile zokuhlanza i-grill
7 I-Proven cleaner cleaner
8 I-Ballistol Kamofix
9 Brauns Heitmann Pure soda soda
10 Dr. I-Becker Brat i-remover yokukhipha
11 I-k2r i-oven cleaner
12 I-cleaner ye-Weber
13 Ngisho namakhambi asekhaya asekudala angasiza ekuhlanzeni amabhande
With cleaner grill ngokumelene umlotha, grease kanye marinade asele
Izakhamuzi zasemanzini, izimila zemifino nezenyama, umuthi ushizi, umlotha namafutha ashisayo - yilokho okuvame ukushiya kwi-grill, lapho zonke izivakashi seziye zahlanza futhi zihlanza ngokukhethekile. Amafutha, amafutha kanye namaprotheni axhunyiwe ensimbi ye-grill kanye nezinhlaka zefomu ezingasuswa kuphela emva kwesikhathi eside ngomzamo omkhulu. Ukuze ufeze umphumela, ngokuvamile ukuhlunga okukhulu futhi ukusetshenziswa kwama-agent agciniwe wokuhlanza kusiza. Kodwa-ke, manje kukhona nobungane obunemvelo futhi nokho nokho kusebenza kakhulu Grill wezindlu, Lokhu kubaluleke kakhudlwana njengoba ukuhlanzwa kwezitshalo zokugcoba kubeka izidingo ezithile kubo. Okokuqala, yiqiniso, yizindawo lapho kulungiselelwa ukudla, okubeka izidingo ezikhethekile zokuhlanzeka. Ngaphezu kwalokho, imishini inganikeza kuphela ukusebenza okudingekayo uma izingxenye zomuntu ngamunye - futhi ikakhulukazi i grate grate - zihlanzekile futhi zikhululekile. Ukudla okudala, amafutha namafutha akuqukethe kuphela ingozi yamabhaktheriya, kodwa futhi ingozi yezidlo ezintsha izanyatheliswa yiphunga elimnandi nelingajabulisayo.
Grille ukuhlanza - indaba ekhethekile
Abahlanzi be-grill akufanele bafakwe ku-aluminium, ipulasitiki noma i-varnish. Nokho, phakathi nendawo yokuhlanza, i-grate ye-grill, eveza izinkinga ezithile ngesikhathi sokuhlanza. Kokubili ukungcoliswa okunamandla ngezinto ezinamanzi ezinamafutha, amafutha namaprotheyini zinenkinga kanye nezindawo ezingalingani kanye nesakhiwo segrill s grate grate. Ngakho-ke izinto kufanele zihambisane isikhathi eside, ngakho-ke akufanele kube yilawo manzi ukuze kuthuthukiswe umphumela wabo wokuqeda amafutha. Endabeni yezinhlanganisela ezivame ukugxila kanye namafutha okushisa, lokhu kungumphumela wokulula kokususa izinsalela. Kumele kuqashelwe ukuthi ukugcoba kwama-grilli grills, ngenxa yobukhulu bawo, ngokuvamile kuvame kakhulu noma kunzima kakhulu. Ngakho-ke, i-detergents engcono kakhulu ifakwe ifomu le-foam nefrafa noma isetshenziswa nge-shayela. Ngakho-ke, umhlanzi we-grill unembile futhi unamathele ngokuphelele kuwo wonke ama-surface ayenzima ukuwafinyelela.
Abathengisi be-barbecue abamnene bavikela imvelo kanye nempilo
Lapho uhlanza amasistimu e-grill, amakhemikhali anonya kakhulu avame ukusetshenziswa. Lezi ziqukethe izingozi ezithile futhi aziphephile kakhulu kubantu noma emvelweni. Kulezi zihlanzi ezijwayelekile zokuhlanza izitsha zisetshenziswa i-sodium lyes, okuthiwa i-caustic alkali (potassium chloride) noma ezinye izinto ezinobungozi zamakhemikhali. Lezi zimali ziyasebenza, kodwa zidinga ukuqapha okukhethekile. Ukuze sigweme ukuthintana kwesikhumba noma ukuphuza imfucumfucu, sincoma ukuthi sigqoke izingubo zokuzivikela kanye nezibuko lapho usebenzisa lezi zingozi. Ukusetshenziswa kufanele futhi kwenzeke kuphela emoyeni ovulekile. Konke, kungashiwo ukuthi imvelo kanye nempilo kunemithwalo emikhulu, ikakhulukazi lapho ukuhlanzwa kwenziwa njalo nokusetshenziswa kwalabo abahlanzekile be-grill.
Kodwa-ke, inqubekela phambili enhle yenziwe ekukhiqizeni abanye abahlanzekile bezinkumbi ezinomsoco kule minyaka embalwa edlule. Ukuhweba manje kunika lonke uhla lwabahlanzi be-grill, okungenalo i-alkalis caustic kanye ne-alkalis caustic. Lezi zinto azikwazi ukuvutha kakhulu noma ziguquke imfucumfucu enobuthi yamehlo nokuphefumula. Ngayo ingasebenza ngaphandle kwezingubo zokuzivikela ngisho nasezikhaleni ezifakiwe. Abahlanzi be-grill bangasetshenziswa kokubili ku-grilli engadini, nakwabapheki kanye nama-hood ekhishini.
Konke kungashiwo ukuthi ukuhlanza izinto kufanele kusetshenziswe kuphela uma izindawo zokugcoba sezikhulile, ngoba ezinye izinyoyi ezinobuthi zingakhula. Ukugxila kumele kuhlanjululwe futhi i-caustic soda ne-potassium leaches kufanele igcinwe kude.
Isikhathi sokuchayeka kanye nezesekeli ezidingekayo
Uma kusetshenziselwa abahlanzi be-grill abasebenzisa imvelo, kuncane izesekeli ezengeziwe ezidingekayo. Kubalulekile ukuthi emva kokusetshenziswa kwe-grilli, isikhathi esingekho isikhathi esiningi siphume ngaphambi kokuqala kokuhlanza. Uma kungenzeka, i-grate ye-grill kufanele ifakwe kwisitsha esikhulu. Kodwa-ke, ukuchithwa, ukuqubuzela kanye nezinto ezisetshenziswe ngebhashishi kuyalandelwa kalula, ukuze le nqubo ingenziwa. Isikhathi sokuchayeka sibalwa ngokuyinhloko ngezinga lokungcola. Uma lokhu kungavumi kakhulu, kungathatha imizuzu embalwa ukusebenzisa umphumela wegesi nokusila. Emva kwalokhu, umhlanzi we-grilla kanye nosizi olucwilisiwe kufanele lusulwe ngendwangu engenalutho nangendwangu ebomvu noma indwangu. Kunconywa ukusebenzisa ingubo ye-microfibre. Uma amafutha, amafutha namaprotheni asele amakhulu kakhulu, ama-pulp angawasebenzisa futhi. Kuzo zonke izinto, into engcono kakhulu ukuyenza ukushiya umhlanzi we-grill ubusuku bonke, kodwa kunoma yikuphi okungenani amahora amabili. Khona-ke amanzi afudumele ahlanzekile kufanele asetshenziselwe ukusula. Ezimweni eziningi, ukusila kufanele kususwe kalula. Lokhu kuyinto ehlukile kunazo zonke ezibonakalayo. Uma ukuthungatha kungakwazi ukulungiswa, ukusetshenziswa kwama-brushes ne-scrapers kuyadingeka.
Ukusetshenziswa kwemibhoshongo ye-grill
Uma i-grill grill isetshenziswe ngokuqinile, ibhulashi le-grill lingasetshenziswa futhi uma usebenzisa ama-agent ahlanzekile kakhulu. Kodwa-ke, ukwaziswa kwe-grate kugcizelelwe kakhulu, ngakho-ke lo mkhuba kufanele usetshenziswe kakhulu kancane. Ibhulashi ye-grill (noma i-scraper) kufanele ifakwe ngendlela efanele ukuze kufinyelele ezindaweni ezinzima. Kuzohwebo, kunezinto ezihambelanayo eziye zakhiwa kusuka ensimbi engenalutho ngokuqondile ukuze zisetshenziswe futhi ngaleyo ndlela zenze ukuhlanzwa okuphumelelayo nokungaqondakali. Endabeni yokushayela i-grill, kunakekelwa ukuthi kufanele kusetshenziswe ukuthi i-brass bristles isetshenziswa. Lokhu kuvumela izinsalela ezizenzekelayo ezivela ensimbi ye-grate ye-grill okufanele zisuswe. Uboya be-steel lungasetshenziswa nakwezinye izimo.
Lezi yizona ezihlanzekile zokuhlanza i-grill
I-Ecolab Acti Grill Cleaner
Lo mkhiqizo wokuhlanza ovela kumenzi we-Ecolab ungenye yezinhlanzi zezempilo ezinobungane nezemvelo ezikhona emakethe. Iphinde isuse ukungcola okunamandla nokukhuni kanye nama-residu okushisa amafutha. Ukhilimu uketshezi lwamakhemikhali okweqile kungcono nakakhulu, njengoba uketshezi noma uketshezi kufakwe ezindaweni eziqondile, ngaleyo ndlela kulula ukuyihlanza. Nakuba lokhu kuyilitha elilodwa elibiza kakhulu kunabanye abahlanza ngentengo ye-30 Euro ngehora ngalinye, libuye lithengise ngokwedlulele ngenxa yokuthi liyinkimbinkimbi futhi lidla kancane kunezinye izihlanzi zezinkumbi.
I-Proven cleaner cleaner
Leli kampani yokuhlanza inamandla okuhlanza okungavamile futhi kunconywa ikakhulukazi ukusetshenziswa ku-grill. Leli ketshezi lingasetshenziswa nasezingxenyeni ezinzima ukuzithola ngokusebenzisa ibhulashi elinikeziwe. Lapha umuntu angahambisa ngokuphepha ngokusebenzisa amabhulashi noma ama-scrapers. Isidakamizwa sisetshenziswa, sivunyelwe ukuba sikhulule, futhi simane sisula ama-residu amafutha kanye namafutha. Kodwa-ke, lo mhlanzi we-grill nge-30 Euro kuphela ye-500 ml ayiyona eshibhile kakhulu. Sicela uqaphele ukulimala kwempilo okungenzeka. Uma uxhumane nesikhumba, amehlo nokuphefumula, lokhu kuhlanza kungabangela ukushisa okukhulu. Uma isetshenziswe ngokuqinile, umonakalo wokushisa ungase ubangelwe yensimbi. Ngenxa yamandla okuhlanza kakhulu, lo mhlanzi we-grill angakwazi ukuhlanza imithi ye-gril grate.
Lokhu empeleni ihlanzekile, eyakhelwe ukuhlanzwa kwemishini yekhishi, njengamapane kanye nezimbiza. Inzuzo lapha ukuthi i-Kamofi, ngokungafani nezinye izihlanzi eziningi zezingcweti zingasetshenziselwa kuphela insimbi, kodwa futhi isetshenziselwa ukuhlanzwa kwe-aluminium. I-Kamofix iyi-foam yokuhlanza okunamathela ngokuqinile, ngisho nasezingxenyeni ezinzima, lapho amafutha, i-soot, futhi eshiswa ngamandla, athola ngokugcwele kusuka ezindaweni. Ukuhlanzwa kwamaphoyinti kuphela kufanele kugwenywe.
Brauns Heitmann Pure soda soda
Le Sodareiniger igxilile kakhulu ngentengo yayo ephansi, ngisho ne-10 Euro. Futhi kungenzeka ukuthi uyithenge, kodwa ingahle ikhiqizwe ngokwayo uma kudingekile. I-powder i-soda ixubene namanzi kanye ne-agent ye-spray, kodwa kufanele isebenze isikhathi eside kakhulu kunabanye abahlanza amabhasi. Okunye okungahambi kahle yi-effect kakhulu yama-alkaline eyenza ukusetshenziswa kokuhlanzwa kwe-aluminium kungenakwenzeka. Ukuhlanzwa kwe-stainless steel, Nokho, lesi soda ash kungaba kuhle futhi, ngaphezu kwakho konke, kusindiswa okunye.
Dr. I-Becker Brat i-remover yokukhipha
Futhi ngale ndlela kusho intengo ye-23 Euro ye-1 ilitha esikhundleni sokuhluka okunamandla kakhulu. Kodwa-ke, thembela amandla okuhlanza, ngesikhathi esisha ngesikhathi ukwelashwa kwesibili. Lokhu kuhlanzekile kunconywa ikakhulukazi ukusetshenziswa kobuchwepheshe. Ukusetshenziswa kwemindeni evamile, amakhemikhali aqukethe amane ayinkimbinkimbi kakhulu ngoba ayabhubhisa kakhulu. Uma usebenzisa lesi sihlanza se-grill kufanele usebenzise izibuko, ukuvikelwa komlomo kanye namagilavu ​​okuzivikela kunoma yikuphi. Inzuzo kaDktBecker crust crusher remover yukuthi ukungcola okunenkani kakhulu akunalo ithuba futhi idivayisi yokugcoba ingahlanzwa ngokuphelele kunoma yikuphi.
I-k2r i-oven cleaner
Ukuphikisana okuyinhloko kokusetshenziswa kwalesi sihlanza se-grill kuyintengo. Ngalitha, lokhu kuhlanza akudingi imali engaphezu kwamahlanu ama-euro. Kodwa-ke, kuyadingeka nokwenza ukusikeka emandleni okuhlanza. Ukusetshenziswa kwebhayisikili noma i-scraper kungasetshenziswa ngisho nesikhathi eside sokuchayeka. Uma ufuna ukulondoloza imali futhi futhi ungasuki ekukhambeni, lokhu kuhlanza kungakalungile.
Uma ufuna ukufezekisa ukuhlanza okusheshayo futhi okungenasisekelo kwe-grill, ungaphinde ufinyelele ukuhlanza kwe-Weber. Uma izingxenyeni zangaphandle ze-grill zikhanya futhi, lokhu kuhlanza kwanele. Ngokumelene nezinsalela zamafutha okushiswa kanye ne-grate eshiswa ngamaqanda abamhlophe nama-marinades, lo mhlanzi we-grill angenza kancane.
Ngisho namakhambi asekhaya asekudala angasiza ekuhlanzeni amabhande
Uma ufuna ukulondoloza imali ngenkathi uhlanza i-barbecue grill futhi usenalo ukuvikelwa kwemvelo engqondweni, ukusetshenziswa kwemishini yasendlini yakudala kunconywa. Ngokuphumelelayo ikakhulukazi, isibonelo, ukushiswa kwe-grate ye-grill. Lapho ama-sausages wokugcina nama-steaks esinyamalale ku-grill, ungavumela i-grill ukuthi ishise futhi iphinde ivuselele kuze kube yilapho amafutha asekugcineni ashisa. Umphumela omnyama we-carbon ungahle ukhululeke ezinsaleleni ezisheshayo kanye nomzamo omncane kanye ne-grill.
Futhi kuyasiza ukusebenzisa ikhofi ebandayo noma indawo yekhofi. Faka isicelo se-liquid noma isisetshenziswa ku-grate ye-grille ngendwangu bese uvumela ukuthi isebenze ubusuku bonke. Futhi ekuseni ngakusasa ungakhulula i-grill kusukela ekungcoleni kwayo okukhulu. Futhi kuphumelela umphumela wokushisa komlotha. Ngaphambili, insipho yayilungiswa ngokuxuba amafutha ngomlotha. Lo mphumela ungasetshenziswa futhi nokuhlanza i-grill, uma usebenzisa i-Aschelauge kuya kubhavu ye-grill esetshenzisiwe. Ngokudabukisayo, ngakolunye uhlangothi, iphoyinti libonakala libeka i-grate ye-grate, uma kufanelekile eduze kwendwangu yenhlanzi. I-crawfish, ngakho-ke ochwepheshe bayophula i-grate ye-grill ngokuphumelelayo ngokuphumelelayo kokudla.
I-party ye-grill ingaba mnandi kakhulu, ukuhlanza kwe-grill ngemuva kwalokho kaningi akunjalo. Nokho emva kokugcoba ngaphambi kokugcoba futhi ama-steaks nama-sausage ayamnandi ngempela uma ephekwe ku-grill ehlanzekile. Endabeni ye-grill yokuhlanza i-grate, omunye kufanele atshale isibambo futhi i-euro iningi kunancane kakhulu. Uma ufuna ukuhlanza i-grill yakho ngokuphumelelayo nangempumelelo, ungaphuthelwa i-barbecue. Uma kunokwenzeka, ukusebenzisa amakhemikhali anzima njengama-potash caustic ne-sodium hydroxide kufanele kube nokonga. Phakathi naleso sikhathi, kukhona nezipulisi eziphilayo ezingenabungozi, ama-creams kanye nokushayela okusabalalisa. Uma ungenayo esandleni sakho, usakwazi ukubuyela emuva kumakhambi amadala asekhaya.
I-Bestseller cha. 1
Isihlungi se-grill Isihlanza esikhethekile sebhayisikili Ukuhlanza emva kokugcoba | | Ukuhlanza kobuchwepheshe ukuhlanza i-grill | I-Grill Grate Cleaner ne-Cleaner esebenzayo | I-PREMIUM GRILL CLEANER - I-URBAN FOREST (isibonisi se-500ml)
✅ HLOLA IGOLA NJENGOMQONDISI: Oklanyelwe izimfuno eziphezulu kakhulu kumkhiqizo wokuhlanza, lesi sihlanzayo esisebenzayo singasetshenziswa cishe kuzo zonke izinhlobo zama-grill. Noma ngabe njengendawo yokuhlanza i-grill ebhemayo, i-grill yamalahle, i-grill kagesi noma i-meza hlupha. Lesi sicoci se-gloss asifaneleki kuphela igesi Grill zihlanzekile kodwa zihlanze ngisho nehhavini ekhwalini lobuchwepheshe. Njengendlela yokuhlanza izimboni yasungulwa ngokuhlanza ochwepheshe baseJalimane futhi yenziwe ngezimboni ezingcono kakhulu ze-premium
I-PREMIUM Quality Yenzelwe EJALIMANE: Phatha i-grill yakho ngokunakekelwa okufanele. Le ndawo yokuhlanza i-premium yokuhlanza i-grill isusa ngaphandle kwamandla inkani, ihlanze, iholele ekukhanyisweni okusha futhi inikeze isivikelo esifanele. Inwebisa impilo yamadivayisi ngokuzinzileyo ngamandla wokuhlanzwa kwensimbi engenasici. Akunandaba noma ngabe ufuna ukuhlanza i-oveni noma uhlanze i-grill, lokhu okuhlanza konke okunenhloso kukusindisa isikhathi esiningi nokusakaza kanzima
ISICELO SOKUVELA: I-cleaner ifanelekile njengendawo yokuhlanza yonkana yezesekeli ze-grill ezifana nezingilazi zama-grill, imimina eyakhiwe ngensimbi, grill grill grill, izitsha ze-grill, ama-skewing we-grill, amathreyi we-grill, amapuleti we-grill, amafoloko we-grill noma amapani we-grill. Ingasetshenziswa njenge-ejensi yokuhlanza i-grill yama-grill grill kanye nesicoci sehhavini, isicoci sesitofu noma isicoci sepani. Ungasebenzisi ezindaweni ezipeyintiwe, ipulasitiki, irabha, izinsimbi ezingezona ezithutha kanye nama-alloys anjenge-zinc, ithusi ne-aluminium
KULULA KUSENZA: Sebenzisa ibhulashi le-hlupha ukususa ukungcola okungaphezulu ku-grill, okufana nesinongo esishisiwe se-grill, fafaza ingaphezulu ukuze lihlanzwe ngesifutho sokuhlanza, sisakaze ngebrashi yokugcoba, susa okokuhlanza masisebenze kancane futhi usule i-grill ehlanzekile . Umphumela uzokumangaza. Njengoba i-grill cleaner igxile kakhulu, inani elincane lanele ukuhlanzwa. Njengesilinganiso sokuvimbela, ungagqoka namagilavu ​​okudla izoso
QU I-PREMIUM QUALITY & NENKONZO: Ukuqinisekiswa kwekhwalithi ephezulu yikhona okubaluleke kakhulu kithi. Ngezithako zeprimiyamu nokukhiqizwa eJalimane ngamanani alungile, asenzi buthaka. Sithanda ukukunikeza lonke ulwazi oludingayo ukwazi nge-URBAN FOREST PREMIUM GRILLREINIGER kusengaphambili. Ithimba lethu lenkonzo enobungane liyatholakala futhi ukuphendula noma imiphi imibuzo ongaba nayo ngocingo noma nge-imeyili
Weber 17875 Grillrost-Reiniger, 300 ml, Nebelspray, löst Fett- und SpeiseresteAnzeige
I-300 ml yesifutho esihle sokukhulula amafutha nezinsalela zokudla kusuka kumagremu nasekamelweni lokudla
Isifutho sokuhlanza imizuzwana engu-30 ukususa izinsalela zamafutha nokudla bese usula
I-Biodegradable azikho izithako eziyingozi
ilungele wonke ama-grill
I-Bestseller cha. 3
I-Maxxi Clean Oven Cleaner 1000 ml ye-Gel Paste incl. I-Oven ne-Grill Cleaner Brush + iBonus agPLUS Fleece Inkomba
UKUHLOLA - Isihlungi se-ovini esisusa ngokuzikhandla noma yikuphi ukugxila okunenkani ngaphandle kokugxeka nokukhipha, ungenza izinto eziningi ezikhululekile
OKUSEBENZISAYO NGESICELO - Ngokumane uphonsa i-gel unamathisele ezindaweni ezibandayo, ungahlanza lapho uthanda khona, futhi ulondoloze ngisho nokuningi ngokuphambene nokuhlanza okuvuthayo okuvuthayo.
UKUKHULULEKILE NGOKUKHULULEKILE - Ifomula yamandla okuhlanza i-ovali okugxilwe ngokwanele iyanele ngokwezikhathi eziningana izinyanga ezimbalwa, ngakho-ke kufanele ube njalo uma kubaluleke kakhulu ukuba ube nomhlanzi ohlanzekile ovini
I-ORANGE FRUIT- Ngokusebenzisa impepho ye-orange yemvelo, eyatholakala kwi-orange peel ishiya i-oven ne-grill cleaner iphunga elimnandi
Dr. I-oven ne-grill cleaner inkomba yokuhlanza ochwepheshe
I-Bestseller cha. 5
bio-Chem intuthu resin remover Grill & wezindlu kuhhavini 500ml ukugxilisa ingqondo kuze kube 20 l yokuhlanza isixazululo isikhangiso
IEL VERSATILE: Ilungele i-grill yamalahle, i-grill kagesi kanye nogesi we-grill kuwo wonke amasayizi nokuhlukahluka, njengokushiswa kwe-grill ye-BBQ, i-kettle grill, i-grill ye-lotus, i-swivel grill / i-tripod grill, i-grill yetafula, i-grill yamakholamu, i-grill grill, indawo yomlilo, I-Mini grill, inqola ye-grill, i-Camping grill, i-grill ye-balcony, i-suitset grill, i-grill eyindilinga, i-grill barrel, i-grill ye-racing kanye ne-roaster yegesi. KUPHELA kufanelekile nge-smokehouse ne-smokehouse. I-EVEN isebenza kwiDashi Oven, kepha i-patina kufanele ivuselelwe kamuva!
✅ UKUSINDA ISIKHATHI: Okokuhlanzwa okuyisisekelo okulula kodwa okubanzi kwe-grill yakho kunoma yisiphi isimo esibi! Isihlanzayo esinamandla sicishe sizisusele ngokuzenzakalela ukungcola, ukungcola okudala nezinsalela ezinjengezentengiso zentuthu kanye namafutha ashisiwe, uwoyela, amaprotheni ne-aluminium foil. Ngenxa yefomula ephumelelayo enogwebu olusebenzayo, ukuskena kanzima noma ezinye izindleko zingagwenywa. I-foam ingashintshwa kalula futhi isuswe kusetshenziswa i-nozzle eguqukayo ekhanda lokufafaza.
QAPHELA: Ngale ndawo yokuhlanza i-grill hhayi nje ngo-grill njengochwepheshe, kodwa futhi nokuhlanza njengoyedwa! Kusebenza ngensimbi engagqwali, i-iron iron, i-koqweqwe lwensimbi, ishidi lensimbi, i-porcelain kanye ne-ceramics. Ngakho-ke ilungele ukuhlanza izinhlobonhlobo zezingxenye zama-grill nezesekeli ze-grill njengetshe le-pizza, i-grill tongs, i-grill plate, i-grill gara, i-grate yokushisa, i-gray tray tray, i-grill tray, ama-drawers wamafutha, izingxenye eziseceleni kanye nethreyi, i-kindling chimney, i-rotisserie, isitsha somlilo, ibhodwe lomlilo, i-grill ket kanye nejantshi lephunga.
I-UNIVERSAL: I-NSF ne-HALAL eqinisekisiwe, ngakho-ke iyasebenza kuyo yonke imboni yokudla. Futhi kufanelekile ekhishini kuzo zonke izinhlobo zamahhavini anjengabhemayo, ohovini kanye nama-ovens e-pizza, kanye nezesekhishini zasekhishini ezinjengamabhodwe, ama-wok, amathayela okubhaka, izigaxa, izinto zokuthambisa ukotini, ukufakwa kokufakwayo, ama-hooder we-femor, amapuleti ashisayo, othayela abajulile kanye namaphaneli owenziwe ngensimbi njengamapani wensimbi, wokuthosa . Ingasetshenziselwa ngisho nezinhlelo zokuphekela namapayipi e-extor ekhishini le-canteen nase canteens.
CON UMQOQO WOKUQHAWULA KANYE WOKUQINISEKA: Ngenxa yokugxila okuphezulu nokuhambelana kwezinto ezibonakalayo akulungele bonke abakhiqizi kuphela, kodwa futhi kukonga kakhulu ukusebenzisa. Futhi ayinama-phosphates nama-sol sol. Ukuze nawe ukwazi ukuzikhohlisa ngohlobo lomkhiqizo oluzifakazile lwe-bio-chem yokuhlanzeka kwemvelo ngekhwalithi yezimboni → USER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=LgHTi6QhVxI (Qaphela imiyalo yokuphepha - kuthunyelwa imvunulo)
I-Bestseller cha. 6
Abapheli be-Grill Cleaner 4975, ye-gas grill BBQ, i-grill, i-smoker, i-oven, i-grill cleaner, i-cleaner, i-500 ml indicator
Egcwele, enamandla, ephumelelayo
Kuzozonke izindawo zokudla
I-bottle Ergonomic enekhi yokuphepha kwengane
Ukususa ama-grease amafilimu, ukushiswa nokungcola
Grillbürste 3 1 e BBQ hlupha ukuxubha Ayikho wire bristles ngokuphephile 304 wokuhlanza ibhulashi insimbi engagqwali spatula okuqinile Nokwelukiweyo amatende hlupha ibhulashi Perfect namalahle hlupha igesi hlupha futhi kagesi hlupha isibonisi
I-BBQ GRILL GRILL GRILL WITH AN EXPRESSION: Yisiza esifanele sabathandi bezinkwa; Ungasebenzisa ibhulashi ukuze ususe kalula ama-stain kanye ne-grit deposits, futhi isikhala se-scraper singakwazi ukuhlanza izinti ezinenkani ngokucophelela nangempumelelo.
I-3 ku-1 EZIQHELELE I-STEEL BARBECUE: I-stainless steel scraper yokudla. Awekho ama-bristles awela. Ayikho imiphetho ebukhali futhi le shayela ye-grill ayincibiliki njengamabhulashi anezinyosi ze-nylon. Akulula ukuheha amamitha, ukuqina okuqinile kokugqwala. Akudingeki ukhathazeke ngokuqukethwe kwesimbi enhle, sicela ukhululeke ukuyisebenzisa.
I-NON-SLIP UHANDLE: Ubude bebhayisikili bungakuvikela isandla sakho ekushiseni okwenziwe yi-grill. Izinto eziphezulu zekhwalithi nezinga-slip ziqinisekisa ukuthi awi noma aphule ngisho nangaphansi kwengcindezi enkulu. Umklamo ophelele webhashashi ukhuthaza ukusetshenziswa kwakho, kusebenza kahle futhi kusindisa umsebenzi.
I-HIGH-QUALITY METERIAL: 18 "Insimbi yensimbi engenasici, ucingo lwensimbi oluxhunyanisiwe kanye nensimbi, eqinile futhi ehlala njalo, engalimazi kalula.
KUSEBENZISWA KWAMAKHAYA AMANZI: Kungakhathaliseki ukuthi i-grille yangaphandle noma igridi yokusetshenziswa kwangaphakathi. Kulula ukuhlanza. Ibhulashi le-grill kufanelekile kuzo zonke izinhlobo zamagxolo, kufaka phakathi i-porcelain, insimbi engenasici kanye ne-cast iron, njll Yenza i-grill yakho ibheke entsha.
Isikhombi sobukhulu be-Mellerud 2001002718 Grill & BBQ Cleaner 475
Foam enamathela ngokuphumelelayo yokukhanya okuphezulu
Iyakhipha izinsalela ezinamathele kanye nokufakelwa
Gentle ezintweni zokwakha, noma ezindaweni ezibucayi
Ukuze ephelele izoso izoso
I-Cheminox Grill Cleaner (1000 ml), gxila kufinyelele kusisombululo se-15 ilitha, isicoci segesi, i-grill yokuhlanza.
Ukuhlanza i-Cheminox: Isicoci esisebenza kahle sazo zonke izinhlobo zama-grill! Njengokugxila kokuxubana namanzi (kuze kufike kwisisombululo se-15 ilitha). Okwe-grill kagesi, grill yamalahle, BBQ kanye ne-grill grate.
Londoloza izindleko: Ngokukhethekile ukonga! Sebenzisa ukungcola okunamandla (1: 2 Concentrate / Amanzi) noma njengesithasiselo (1: 20 Concentrate / Amanzi). Izinhlelo zokusebenza ngokuphumelelayo kunemikhiqizo evele ixubeke.
Ukuhlanza i-Grill: Kulula ukuyisebenzisa! I-ejenti yokuhlanza isusa ngokunethezeka inhlabathi enenkani nenamathele njengamafutha, igrisi, isoso, i-wax, iziqeshana zeminwe, igrisi, uthuli njll.
Umkhiqizo wekhwalithi ye-premium: ayihlaseli i-grill yamalahle akho, i-grill kagesi noma i-grill kabh. Izimboni ejwayelekile yokuphathwa okuhlanzekile futhi okulula. Ekhishini elikhulu, esiteshini se-canteen, esiteshini sikakhokho!
Kwenziwe futhi kukhiqizwa ngokuya ngamazinga aphezulu kakhulu eJalimane. Ukuhlanza i-grill yegesi, i-grill kaber yokuhlanza, i-grill yokuhlanza i-grill yensimbi engenasici. Ukuhlanza kuqinile, kuyashesha futhi kukhulu.
siphoI-Bestseller cha. 10
I-Bio-Chem Bio BBQ yokuhlanza eyokuhlanza eyakhiwe kahle ye-aluminium nensimbi engenasici (500 ml) isibonisi
✅ QAPHELA: Ukuze 𝗸𝗿𝗮𝗳𝘁𝘃𝗼𝗹𝗹𝗲𝗻 kanye 𝗸𝗿𝗮𝗳𝘁𝘃𝗼𝗹𝗹𝗲𝗻 yokuhlanza 𝗲𝗺𝗽𝗳𝗶𝗻𝗱𝗹𝗶𝗰𝗵𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗢𝗯𝗲𝗿𝗳𝗹ä𝗰𝗵𝗲𝗻 grill. I-𝗮𝘂𝗳, insimbi engagqwali, i-iron yensimbi, i-koqweqwe lwensimbi, i-chrome, i-sheet iron, i-tinplate, ithusi, ithusi, insimbi engaphenduli, i-porcelain, indawo eyisisekelo, ukudubula kobumba kanye nangaphezu kwakho konke 𝗔𝗹𝘂𝗺𝗶𝗻𝗶𝘂𝗺. → 𝗕𝗲𝘀𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗵𝗲𝗶𝘁: Kushiya ukuvikelwa kokugqwala okuhlala isikhathi eside futhi kudlulisela phambili impilo ye-grill!
✅ UKWENZA: Ngamandla ayo amaningi okuqothula, ama-𝗳𝗲𝘁𝘁𝗹ö𝘀𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗚𝗿𝗶𝗹𝗹𝗿𝗲𝗶𝗻𝗶𝗴𝗲𝗿 asusa amandla, i-oyili, amaprotheni, amadiphozi agcwele, izinsalela zokudla ezishisiwe, ukudla okugayiwe kwakudala kanye nokufakwa kokudonswa phansi okungcolile kanye nokufakelwa ukukhanya.
✅ I-DIVERSE: I-grill yamalahle kagesi, i-grill kagesi kanye nogesi we-grill kuwo wonke amasayizi nokuhlukahluka, njengokushiswa kwe-grill ye-BBQ, i-grill ye-kettle, i-grill ye-lotus, i-grill ye-swivel / i-tripod grill, i-grill ye-grill, i-grill yendawo, ikholomu eyosiwe, indawo yomlilo eyosiwe, I-Mini grill, inqola ye-grill, i-Camping grill, i-grill ye-balcony, i-suitset grill, i-grill eyindilinga, i-grill barrel, i-grill ye-racing kanye ne-roaster yegesi. OKWENGEZIWE zilungele zonke izinhlobo zamahovini anjengabhemayo, ohovini kanye nama-oveni epitsa. - Noma kusebenza eDutch Oven nge-patina eqinile!
IKHODI LOKUQALA: Kuhlanganisa, ukuhlanza i-grill, ukunakekelwa nokuvikelwa. Futhi ayisebenziseki kuphela 𝗸𝗲𝗻𝗻𝘇𝗲𝗶𝗰𝗵𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝗳𝗿𝗲𝗶 futhi ngaphandle kwezingubo zokuvikela ngaphakathi noma ngaphandle, kodwa futhi 𝘂𝗺𝘄𝗲𝗹𝘁𝗳𝗿𝗲𝘂𝗻𝗱𝗹𝗶𝗰𝗵 kanye 𝗹𝗲𝗯𝗲𝗻𝘀𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗹𝗴𝗲𝗲𝗶𝗴𝗻𝗲𝘁. I-→ 𝗜𝗱𝗲𝗮𝗹𝗲𝗿 𝗞𝗿𝗮𝗳𝘁𝗿𝗲𝗶𝗻𝗶𝗴𝗲𝗿 yokuhlanza 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃 𝗵𝗼𝗰𝗵𝘄𝗲𝗿𝘁𝗶𝗴𝗲 ekhishini le-canteen, iresti nezimboni zokudla.
OKUQUKETHWE: Ngaphezu kokuhlanza izingxenye eziningi ze-grill nezesekeli ze-grill ezifana netshe le-pizza, ipuleti yengubo, izinto zokufudumeza, ugqoko wamafutha, i-grill tray, okokugcoba kwamafutha, izingxenye eziseceleni namashalofu, i-hood yokupheka, i-fireling fireplace, i-rotisserie, isitsha somlilo, imbiza yomlilo, i-grill yamatshe / i-grill, ojantshi bephunga Izingxenye zasekhishini ezinjengamabhodwe, ama-wok, amathayela okubhaka, ama-drip pins, ama-codic hobs, ama-extractor (ama-extor hoods), amapuleti ashisayo nezimbobo zensimbi ezakhiwe njengamapani e-cast iron, amapani wokuthambisa noma amapani we-grill afanele.
Ubufakazi bomuntu ngamunye: i-grill cleaner Izibuyekezo
Isilinganiselwa: 3.7/ 5. Kusuka kumavoti angu-3.
Isihloko sangaphambiliniIthuluzi multifunction
Isihloko esilandelayopool cleaner